အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ နိုင်ငံကုဒ်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲလှုပ်ရှားမှု အလံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲလှုပ်ရှားမှု အလံ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ(IOC)သည် အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲဝင် နိုင်ငံများ၏အသင်းများအား ရည်ညွှန်းဖော်ပြရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာသုံးလုံးပါသော နိုင်ငံကုဒ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ထိုကုဒ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မတီ(National Olympic Committee (NOC))များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့ပေမယ့် ကျင်းပခဲ့ပြီးသော အားကစားပြိုင်ပွဲများမှာ များစွာသော ကုဒ်များအား အခြားသော အကြောင်းအချက်များကြောင့် အသုံးပြုခဲ့သည်များလည်းရှိသည်။ (နိုင်ငံများစွာမှ ပေါင်းစုပြိုင်သော အားကစားသမားများအတွက် (သို့မဟုတ်) မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှ တရားဝင်အားဖြင့် ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိသော ကစားသမားများအတွက်)
များစွာသော IOC ကုဒ်များသည် ISO 3166-1 alpha-3 ကုဒ်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ အခြားသော အားကစားအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ဖီဖာကဲသို့သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဤကဲ့သို့နိုင်ငံကုဒ်များ အသုံးပြုသော်လည်း အချို့သာ ကွဲလွဲမှုရှိသည်။
၂ လက်ရှိ အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီကုဒ်များ
၃ လက်ရှိ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲကော်မတီကုဒ်များ
၄ သမိုင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော NOC များနှင့် အသင်းများ
၄.၁ လက်ရှိအသုံးပြုဆဲ ကုဒ်များ
၄.၂ တိမ်ကောသွားသော နိုင်ငံကုဒ်များ
၅ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအတွက် အထူးကုဒ်များ
၆ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် အထူးကုဒ်များ
အိုလံပစ် လှုပ်ရှားမှု(Olympic Movement)အတွင်း ပါဝင်သော အမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မတီ ၂၀၆ ခုရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် အမျိုးသားအိုလံပစ်ကော်မတီအသီးသီးအတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ကုဒ်များနှင့် ကျင်းပပြီးခဲ့သော အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ကွဲပြားသည့် ကုဒ်များကို သက်ဆိုင်ရာအားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ တရားဝင်တင်ပြချက်များနှင့်အညီ ဖော်ပြထားသည်။ တစ်နှစ်တည်းတွင် ကျင်းပခဲ့သော အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများအတွက် နွေရာသီ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ဆောင်ရာသီ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတို့အားသီးခြားစီ သီးသန့်အသုံးပြုခဲ့သော ကုဒ်များကို နွေရာသီအတွက် "S" နှင့် ဆောင်းရောသီအတွက် "W" ဖြင့် ခွဲခြား ဖော်ပြထားသည်။
အခြား အသုံးပြုခဲ့သော ကုဒ်များ
COD  Democratic Republic of the Congo COK (1968), ZAI (1972–1996)
MYA  မြန်မာနိုင်ငံ BIR (1948-1960, 1968–1988), BUR (1964)
SRI  Sri Lanka CEY (1948-1964, 1972), CEI (1968 S)
SYR  Syria SIR (1968)
TLS  East Timor
TPE  Chinese Taipei RCF (1956-1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976)
များသောအားဖြင့် အမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မတီဝင်နိုင်ငံများမှ သက်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ကော်မတီ(National Paralympic Committees (NPC))အား လွှမ်းခြုံလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် NPC ကုဒ်နှင့် IOC ကုဒ်များသည် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ ထပ်တူညီကြသည်။ လက်ရှိဖော်ပြထားသော NPC နှစ်ခုမှာ သက်ဆိုင်ရာ NOC နှင့်မသက်ဆိုင်ပဲ ဖော်ပြပါ NPC ကုဒ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
MAC Associação Recreativa dos Deficientes de Macau Macau
FRO The Faroese Sport Organisation for Disabled Archived 8 December 2016 at the Wayback Machine. Faroe Islands
သမိုင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သော NOC များနှင့် အသင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
သမိုင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သော အမျိုးသား အိုလံပစ်ကော်မတီ (သို့) အသင်း ၁၄ ခု၏ ကုဒ်များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုလံပစ်ကော်မတီ ရလဒ်ဒေတာဘေ့စ်တွင် ထိုအသင်းများမှာ ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သော ကစားသမားများအား ဖော်ပြရန်အတွက် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။
EUN တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း IOC Unified Team
ZZX တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း IOC Mixed teams
IHO တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Dutch East Indies ၁၉၃၄–၁၉၃၈ ယခုအခါ Indonesia (INA)
BIR မြန်မာ ၁၉၄၈–၁၉၈၈ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ (MYA)
CEY Ceylon ၁၉၄၈–၁၉၇၂ ယခုအခါ Sri Lanka (SRI)
DAH Dahomey ၁၉၆၄–၁၉၇၆ ယခုအခါ Benin (BEN)
GUI တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း British Guiana ၁၉၄၈–၁၉၆၄ ယခုအခါ Guyana (GUY)
HBR British Honduras ၁၉၆၈–၁၉၇၂ ယခုအခါ Belize (BIZ)
KHM Khmer Republic ၁၉၇၂–၁၉၇၆ ယခုအခါ Cambodia (CAM)
MAL Malaya ၁၉၅၆–၁၉၆၀ ၁၉၆၃ ခုနှစ် မလေးရှားနိုင်ငံမတည်ထောင်နိုင်မှီက သီးခြားလွတ်လပ်စွာပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ်။
ယခုအခါ Malaysia (MAS)
NBO North Borneo ၁၉၅၆
NRH Northern Rhodesia ၁၉၆၄ ယခုအခါ Zambia (ZAM)
RAU တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း United Arab Republic ၁၉၆၀ ယခုအခါ Egypt (EGY)
နှင့် Syria (SYR)
RHO Rhodesia ၁၉၆၀–၁၉၇၂ ယခုအခါ Zimbabwe (ZIM)
ROC Republic of China ၁၉၃၂–၁၉၇၆ ယခုအခါ Chinese Taipei (TPE) ဟုသော အမည်ဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်နေ။
SAA Saar ၁၉၅၂ ၁၉၅၇ ခုနှစ် West Germany (FRG) နှင့် ပြန်လည်မပေါင်းစည်းမှီ သီးခြားပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ်။
UAR United Arab Republic ၁၉၆၄–၁၉၆၈ ယခုအခါ Egypt (EGY)
VOL Upper Volta ၁၉၇၂–၁၉၈၄ ယခုအခါ Burkina Faso (BUR)
YAR North Yemen ၁၉၈၄–၁၉၈၈ ၁၉၉၀ ခုနှစ် ယီမင် ပေါင်းစည်းမှုမတိုင်မီ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့စဉ်။
ယခုအခါ Yemen (YEM)
YMD South Yemen ၁၉၈၈
ZAI Zaire ၁၉၇၂–၁၉၉၆ ယခုအခါ Democratic Republic of the Congo (COD)
—— တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Gold Coast ၁၉၅၂ ယခုအခါ Ghana (GHA)
HOL ကို NED သို့ ၁၉၉၂ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဟော်လန်နိုင်ငံ(Holland)မှ နိုင်ငံအမည်ပြောင်းလဲခဲ့သော နယ်သာလန်နိုင်ငံ(Netherlands)အား ကိုယ်စားပြုရန်အတွက်။
IRN ကို IRI သို့ ၁၉၉၂ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် Islamic Republic of Iran ဟုပြောင်းလဲခဲ့သော အီရန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက်။
EUA United Team of Germany 1956–1964 Used in the IOC's medal database to identify the United Team of Germany, composed of athletes representing the NOCs of both East Germany and West Germany for the 1956–1964 Games. At the time, the team was simply known as Germany in the official reports for those six Games.
IOP Independent Olympic Participants 1992, 2014 Used for Independent Olympic Participants at the 1992 Summer Olympics asadesignation used for athletes from FR Yugoslavia who could not compete asateam due to United Nations sanctions. At the 1992 Summer Olympics IOP was used asadesignation for athletes from the Republic of Macedonia too. IOP was also used during the 2014 Winter Olympics in Sochi by Indian athletes due to the Indian Olympic Association suspension.
IOA Independent Olympic Athletes 2000, 2012, 2016 Used for Individual Olympic Athletes in 2000,adesignation used for athletes from Timor-Leste prior to the formation of its NOC. IOA was used again in the 2012 Games, when it stood for Independent Olympic Athletes, comprising athletes from the former Netherlands Antilles andarunner from South Sudan. The Netherlands Antilles Olympic Committee's membership from the IOC was withdrawn the previous year, and South Sudan has not formed an NOC. IOA was used again in 2016 for athletes from Kuwait asaresult of the suspension of its National Olympic Committee.
MIX Mixed-NOCs 2010–2016 Used as the country code for Mixed NOCs at the Youth Olympics.
IPA Individual Paralympic Athletes 2000,2016
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ Olympic Medal Winners။ International Olympic Committee။ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IOC။ Olympic Korean Peninsula Declaration။ 20 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Results။ 2007-09-27 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Independent Olympic Athletes။ London 2012 Olympic and Paralympic Games။ 2013-02-28 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ "Independent Olympic Athletes"။3August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 15 August 2016။
↑ Mixed NOCs။ 2014-02-25 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ IOC suspends Russian NOC and createsapath for clean individual athletes to compete in PyeongChang 2018 under the Olympic Flag (24 January 2018)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_အိုလံပစ်ကော်မတီ_နိုင်ငံကုဒ်များ&oldid=727520" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။